I-United Airlines idubula abasebenzi abangama-593 ngokwala ukugonywa
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » I-United Airlines idubula abasebenzi abangama-593 ngokwala ukugonywa
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zeMpilo • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Safety • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba zase-USA ezaphulayo
I-United Airlines yayingumphathi wokuqala wase-US ukunyanzelisa igunya lokugonya i-COVID-19 kubasebenzi bayo ekuqaleni kuka-Agasti. Ezinye iinqwelo-moya zase-US bezingakulungelanga ukulandela, kodwa ziye zagqitywa ukukhusela ukuhlawulwa kwabasebenzi abangagonyelwanga abavavanya intsholongwane.
Abasebenzi be-United Airlines abangama-67,000 base-US bayalelwa ukuba banikeze ubungqina bokugonywa ngoMvulo odlulileyo.
I-United Airlines, nangona kunjalo, iyabavumela abasebenzi ukuba bagcine imisebenzi yabo ukuba bagonyiwe kodwa basilela ukungenisa ubungqina ngomhla obekiweyo.
Abasebenzi abangagonywanga baneeveki ezininzi phantsi kwemigaqo yomanyano yabasebenzi yokugxothwa ukuze bafumane isitofu ukuba bafuna ukuhlala.
I-United Airlines iyalele abasebenzi bayo base-US abangama-67,000 ukuba babonelele ngobungqina bokugonywa ngoMvulo odlulileyo.
Ngoku abasebenzi beenkampani abangama-593 bajongene nokukhutshwa emva kokusilela ukuthobela umgaqo-nkqubo wokugonya we-COVID-19 weenqwelomoya.
"Esi sisigqibo esasinzima ngendlela emangalisayo kodwa ukugcina iqela lethu likhuselekile bekusoloko kuyeyona nto iphambili kuthi," utshilo umphathi omkhulu wenqwelomoya eChicago uScott Kirby kunye nomongameli uBrett Hart kwimemo kubasebenzi.
Ngelixa uninzi lwe United AirlinesAbasebenzi bathobela umgaqo-nkqubo wenkampani, abasebenzi abangama-593 benqabile ukuxhuzulwa kwaye basilela ukufaka isicelo sokuxolelwa ngenxa yezizathu zonqulo okanye zonyango ezabekwa yinkampani njengesinyanzelo kwimeko yokusilela ukutofa.
"Ingqiqo yethu yokufuna isitofu kubo bonke abasebenzi base-United base-US yayilula-ukugcina abantu bethu bekhuselekile-kwaye inyani yile: wonke umntu ukhuselekile xa wonke umntu egonyiwe, kwaye iimfuno zokugonya zisebenza," utshilo u-United kwimemo.
United Airlines Nangona kunjalo, uyabavumela abasebenzi ukuba bagcine imisebenzi yabo ukuba bagonyiwe kodwa basilela ukungenisa ubungqina ngomhla obekiweyo, okanye ukuba baya kujongwa ngaphambi kokuba isigqibo esisemthethweni sokugxothwa siphume.
Oku kuthetha ukuba abasebenzi abangagonywanga baneeveki okanye iinyanga ezininzi phantsi kwemigaqo yomanyano yabasebenzi yokugxothwa ukuba bafumane isitofu ukuba bafuna ukuhlala.
I-United Airlines ibhengeze ebutsheni bale nyanga ukuba izakubabeka abasebenzi abangaxolelwanga kwigunya lokugonya kwikhefu elingahlawulelwayo okanye lonyango ukusukela ngo-Okthobha 2. Isicwangciso saye satshitshiswa emva kokuba isimangalo esifakwe ngabasebenzi abathandathu sibhenela kwisigqibo. Malunga ne-2,000 XNUMX yabasebenzi ukuza kuthi ga ngoku bacele ukukhululwa.
I-United Airlines yayingumphathi wokuqala wase-US ukunyanzelisa igunya lokugonya i-COVID-19 kubasebenzi bayo ekuqaleni kuka-Agasti. Ezinye iinqwelo-moya zase-US bezingakulungelanga ukulandela, kodwa ziye zagqitywa ukukhusela ukuhlawulwa kwabasebenzi abangagonyelwanga abavavanya intsholongwane. Isekwe eGeorgia Delta Air Lines wabetha i-inshorensi yenyanga ye-inshorensi yempilo kubasebenzi abangagonywanga.
Njengezinye iinqwelomoya, I-United yabethwa kanobom zizithintelo zokuhamba ezibangelwe yindyikitya yokufa, kwanyanzeleka ukuba inike abasebenzi abangama-36,000 ukuphakama kwengxaki kunyaka ophelileyo.